Swaziland dia miomana amin'ny Dance Reed 2017
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Swaziland dia miomana amin'ny Dance Reed 2017
Aogositra 17, 2017
Ny festival ara-kolontsaina lehibe indrindra an'ny Kingdom of Swaziland, fantatra amin'ny anarana hoe Umhlanga na Reed Dance, dia kasaina hatao ny 29 aogositra miaraka amin'ny andro lehibe (Andro 7) izay hatao amin'ny 4 septambra. Feno hira sy dihy ary natrehin'ny Mpanjaka, ny andro lehibe izay fialantsasatra ampahibemaso any Swaziland koa, dia mitaona ny vahoaka avy lavitra sy lavitra mba hankalaza sy handray anjara amin'ny fety rehetra.
Miaraka amin'ny fomban-drazana efa hatramin'ny taonjato maro lasa izay, ny lanonana Reed Dance dia seho mahatalanjona. Nandritra io lanonana io no nanoloran'ireo vehivavy vavy tsy manambady sy tsy niteraka anaka ny volotara vao notapahina tamin'ny Reny Mpanjakavavy hiarovana ny fonenany. Indraindray ny Mpanjaka dia manararaotra mampiasa io fotoana io amin'ny fitsarana ampahibemaso ho vady na Liphovela.
Rehefa tonga ny andro lehibe dia mivory ao amin'ny tranon'ny mpanjaka any Ludzidzini ireo tovovavy avy any amin'ny faritra rehetra any Swaziland sy any an-dafin'ny sisintaniny noho io fotoana lehibe io. Mivondrona ireo andian-tafika ary mivoaka eny amoron'ny renirano mba hanapaka sy hanangona bararata lava, hamatotra azy ireo ary hiverina any Ludzidzini, ilay Royal Homestead any Lobamba. Tovovavy an'aliny maro, tarihin'ireo andriambavy Swazi, no manome ranomasina miloko rehefa mandihy sy mihira izy ireo, mitondra am-pireharehana ireo bararata tapaka.
Ny mponina amin'ity Fanjakana be tendrombohitra ity dia tia tanindrazana tokoa amin'ny kolontsainy ary fotoana iray ireharehana sy tombony ho an'ny fianakaviana iray manontolo ny fandraisana anjara amin'ity festival ity.
Ny fisongadinan'ity hetsika ity dia ny lanonana fanomezana-bararata - iray amin'ireo fahitana ara-kolontsaina lehibe indrindra eto Afrika. Mivory ao Ludzidzini ireo tovovavy mitafy akanjo nentim-paharazana; zipo fohy fohy mamirapiratra miaraka amin'ny fehin-kibo miloko mandihy, mihira ary mankalaza ny firaisan'ny vehivavy ao amin'ny Fanjakana. Ny Mpanjaka Majswist Mswati lll dia manatevin-daharana ireo fankalazana ireo hanomezam-boninahitra ireo tovovavy.
Amin'ny faran'ny andro, raha vantany vao naneho ny volotara notapahiny ireo tovovavy rehetra, dia afaka nanomboka ny fananganana ny fiarovana Guma (fefy bararata) manodidina ny tranon'ny renin'ny Mpanjakavavy.
Ny Fetiben'ny Umhlanga dia mifamatotra amin'ity firenena kely ity nefa mbola niforona lavorary. Ny lazany tsy mitsaha-mitombo dia manohitra ny fihenan'ny kolontsaina nentim-paharazana any amin'ny faritra hafa any Afrika.
Ny fijoroana vavolombelona amin'ity festival ity dia traikefa tsy manam-paharoa tamin'ny fifangaroan'ny kolontsaina fahizay tany an'efitra, tany an'efitra, ny bibidia ary ny fanahin'ny fitsangantsanganana!
Thailand Live Gastronomy festival hampisondrotra ny fizahan-tany mahandro sakafo ao amin'ilay Fanjakana
Denise Atkinson dia miakatra ho lohan'ny varotra ho an'ny Travellanda